Best smartwatches na gam akporo Wear | Akụkọ akụrụngwa
Ruo n'oge na-adịbeghị anya ọtụtụ n'ime anyị yiri elekere dijitalụ ma ọ bụ analog na nkwojiaka anyị nke nwere ike ime karịa karịa ịgwa anyị oge ahụ. Agbanyeghị, ọganihu teknụzụ kwere n'oge na-adịbeghị anya smartwatches amalitela ịba ụba n'ahịa ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ smart ese.
Ngwaọrụ ndị a na-enye anyị ohere ịhụ oge ahụ, kamakwa ka anyị na ekwentị anyị rụkọrịta ọrụ iji gosi anyị ọkwa dị iche iche anyị nwere ike ịnata ma rụọ, dịka ọmụmaatụ, ọrụ nke ịkọwa mmega ahụ anyị ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ ọbụlagodi obi anyị.
Anyị na-eche ihu ụfọdụ ngwaọrụ ndị dị n'oge a pere mpe nke ọma na yana oge izu na ọnwa na-etinye nhọrọ na ọrụ ọhụụ na-atọ ụtọ. Ka o sina dị Taa, anyị chọrọ igosi ihe n'uche anyị bụ smartwatches kachasị mma na ahịa yana sistemụ arụmọrụ gam akporo Wear, Google sistemụ maka ndị a smart ese.
Ọ bụrụ na ị na-achọ smartwatch iji eyi n'oge okpomọkụ a na nkwojiaka gị, ikekwe otu n'ime ụdị ndị a nwere ike ime ka ị kwenye, mana cheta na ha niile nwere Android Wear arụnyere n'ime na taa n'ahịa ị nwere ike ịchọta nhọrọ ndị ọzọ na ngwanrọ ndị ọzọ na ha nwere ike na-akpali.
The Motorola Moto 360 a na-ahụta ka otu n'ime ndị mbụ ukwuu smartwatches, maka nkọwa ya, ma karịa ihe niile maka okirikiri okirikiri ya nke jisiri ike jide ọtụtụ ndị ọrụ. Taa, ma nyekwa ọbịbịa na-esote n'ahịa nke ụdị nke abụọ nke smartwatch a, ọ nwere ọnụahịa dị oke ọnụ ma nke ahụ nwere ike ịmasị onye ọrụ ọ bụla.
Ihe ọzọ kachasị mma bụ na ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke eriri dị iche iche iji nwee ike ịhazi ya ka ọ masị anyị. O nwekwara, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, ụfọdụ ihe na - adịghị mma na nke a bụ batrị ya nke na - enyeghị anyị ohere iru njedebe nke ụbọchị.
Ọ bụrụ na ị na-achọ smartwatch na a mara mma imewe, customization ohere, ezi echiche nkọwa na a pụtara ala priceTụnyere ndị ọzọ yiri ngwaọrụ na ahịa, a Moto 360 nwere ike na-abụ oké nhọrọ.
Nwere ike ịzụta Motorola Moto 360 site na Amazon HERE.
El Sony Smartwatch 3 Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime smartwatches kachasị mma na ahịa taa ma ọ bụ nke ahụ na atụmatụ ya mara mma, ọ bụ ezie na ikekwe obere enwetara ya ebe ọ gwụchara kpamkpam na plastik belụsọ na anyị nwetara eriri igwe nwere ọnụahịa "astronomical".
Njirimara ya dị ka nke ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya na ahịa; Ihuenyo nke 1,6-inch nwere mkpebi pixel 320 × 320, ihe nhazi 7 GHz Quad ARM A1,2, 512 MB Ram, ebe nchekwa 4 GB, na njikọta Bluetooth na NFC.
Kpụrụ ọzọ dị ya mma bụ na n’agbanyeghi na ọ dị arọ Naanị ihe dị nha nke gram iri anọ na ise, nke ga-eme ka anyị jiri ngwaọrụ dị mma na nkwojiaka.
Smart nwere ike ịzụta Sony Smartwatch 3 site na Amazon HERE.
LG bụ otu n'ime ndị na-emepụta smart elekere anya nke mepere ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke ụdị ụdị a na ahịa, na-enwe ike melite nke ọma na smartwatch ọ bụla ọ malitere na ahịa. Na LG G Watch R Ọ bụ otu n'ime ndị ọhụrụ ụdị ulo oru na ahịa na na nwere ike gabiga n'ụzọ zuru oke site na nche nke ndụ niileỌ gwụla ma o doro anya, ị gbanye ma chọpụta na ọ bụghị ihe ọ dị ka ọ dị.
Ihuenyo ya na teknụzụ OLED bụ 1,3 sentimita, ọ nwere ike bụrụ obere ihe maka onye ọrụ ọ bụla na ndị ọzọ ka ya na ya na-emekọrịta ihe, bụrụkwa akụkụ ya kachasị njọ. Ọnụahịa ya adịghịkwa mma, ọkachasị na e nwere ngwaọrụ ọhụụ nke ụdị a na ahịa nwere ọnụahịa ndị yiri ya.
Nwere ike ịzụta LG G Watch R site Amazon HERE.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị na ahịa ma, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na-esote ụbọchị ole na ole, na Huawei Watch Ọ bụ maka ọtụtụ smartwatch mara mma na ahịa. Mkparịta ụka mbụ anyị na ya nọ na nzukọ ikpeazụ nke World World Congress na ọ hapụrụ anyị oke obi ụtọ na ọchịchọ ịnwe ya n'aka anyị.
Na mgbakwunye na imepụta ya, ọ pụtara maka ya Ihuenyo AMOLED nke 1,4-anụ ọhịa na nke ahụ nwere mkpebi nke 400 x 400 pikselụ, na-emepụta njupụta kwa inch nke 286 pikselụ. Nkọwa ndị a na-etinye ya dị ka smartwatch kacha mma n'ihe gbasara ihuenyo nke ndị niile dị na gam akporo Wear panorama.
Ya price mwute ikwu na abụghị otu nke ya kasị mma akụkụ na ọ bụ na 349 euro nke ụdị kachasị ọnụ ga-efu Ha wetara ya nso, dịka ọmụmaatụ, Apple Watch, nke a na-ahụta dịka otu n'ime ngwaọrụ kachasị mma nke ụdị a, ma werekwa smartwatch adịchaghị mma.
El ASUS ZenWatch Ọ bụ ezie na ọ dị adị na ahịa ruo oge ụfọdụ, ọ gbalịsiri ike ịnọgide na-abụ nhọrọ dị mma maka ekele ọ na-enye onye ọrụ n'etiti arụmọrụ, imewe na ịrụ ọrụ. Na mgbakwunye, ọnụahịa ya dị ala karịa nke ọtụtụ ngwaọrụ nke ụdị a, nke mere ka ọ bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka nkwojiaka ọ bụla.
Ihe bu isi ya bu ihe ndia; Ihuenyo 1,63-inch na mkpebi nke 320 x 320 pikselụ, Snapdragon 400 processor, 512 MB RAM na batrị 369 mAh nke ga-eme ka anyị rute na njedebe nke ụbọchị na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Versiondị nke abụọ nke ASUS ZenWatch nwere ike ịbụrịrị na mmepe ma enwere ike iwepụta ya n'oge nkeji nke atọ nke afọ, mana nke ahụ anaghị eme ka smartwatch a bụrụ nke zuru oke.
Nwere ike ịzụta Asus Zen Watch site Amazon HERE.
El LG Watch Urbane Ọ bụ ihe ọzọ na smart nche na LG nwere na ahịa na nwere a sober imewe, ọ bụ ezie na ikekwe oke njọ na-enwe ike iru niile ọrụ. Ya elu price na-adịghị ekwe ka ọ na-dị ka ihe niile ọrụ ndị na-ahụ a mma nhọrọ na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Banyere nkọwa ya, anyị na-eche ihu ihuenyo 1,3-inch, 320 x 320 pixel P-OLED. N'ime anyị na-ahụ Snapdragon 400 processor na-agba ọsọ na ọsọ nke 1,2 GHz. Batrị ya abụghị ihe ijuanya, dịka ọ bụla na smart watch, ọ bụ ezie na ọ ga-enye anyị ohere iru ngwụcha ụbọchị na enweghị nsogbu.
N'echiche anyị Naanị ihe anyị nwere ike ịgwa gị bụ belụsọ ma ị bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị kpochapụwo, elekere a nwere ike ọ gaghị adị mma n'ụdị gị.
Nwere ike ịzụta LG Watch Urbane site na Amazon HERE.
Dị ka ọ dị na mbụ, ndị a bụ naanị 6 nke smartwatches kachasị mma na ahịa na sistemụ arụmọrụ gam akporo, ọ bụ ezie na e nwere ụfọdụ, ụdị niile na ọnụahịa dị iche iche.
Kedu ihe ị chere bụ smartwatch kacha mma na gam akporo Wear na ahịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ndị a bụ smartwatches kachasị mma na Wear gam akporo
Ngwa 5 nke ị nwere ike idekọ oku ọ bụla na ekwentị gị